Ụzọ Dị Iche Iche Ndị Igbo Si Achọ Mma. - Eastern Reporter
ASUSU NA OMENALA EKIKE IGBO
N’ala Igbo anyị ga-asị na ịchọ mma malitere mgbe ndị Igbo malitere. A bịa n’ịchọ mma nke ahụ, ụfọdụ bụ ndị dịịrị ụmụ nwoke. Ụfọdụ dịịrị ụmụ nwaanyị, ebe ụfọdụ dịkwara ha abụọ.
Igbu ichi bụ ịchọ mma nke dịịrị naanị ụmụ nwoke. Ha ji ya achọ ihu ha mma. Ọ bụkwa ụzọ e si ama na nwoke eruola ihe e ji mmadụ eme. Ịdụ nki bụkwa ụzọ nwoke na nwaanyị si achọ ahụ ha mma. A na-eji nki ese ihe dị iche iche n’elu ahụ mmadụ.
Ụfọdụ n’ime ihe a na-ese bụ ngwere, mbe na anụ ndị ọzọ. Ebe a na-ese ihe ndị a nwere ike bụrụ n’azụ, obi, afọ, ma ọ bụ n’apata ụkwụ onye ahụ. Ibi mbibi so n’otu ihe ụmụ nwaanyị ji achọ onwe ha mma. Ụmụ nwoke anaghị ebi mbibi.
Ọ bụ n’elu afọ nwaanyị ka a na-ebi mbibi. A ga-ebido ya n’obi onye ahụ ruo n’okpuru otubo ya. Nke a bụkwa otu ụzọ e si ama na nwaanyị eruola ihe e ji mmadụ eme. Ndị Igbo nwekwara ihe odide dị iche iche ha ji achọ ahụ ha mma. Ndị na-emekarị nkea bụ ụmụ nwaanyị.
Ha na-ede uri, na-ede ọgaalụ na nkasịala. Ha na-etekwa uhie na edo n’ahụ ha. Ha na-ede ọtanjele n’anya ha. Ọzọkwa, ụmụ nwaanyị ejighị isi ha egwu egwu. Ha na-edozi isi ha n’ụzọ dị iche iche ma nyekwa ha aha dị iche iche.
Ụfọdụ ka a na-akpọ “isi ego” ebe ụfọdụ bụ “isi okpoko.” “isi aka” “isi owu” wgdz.
Chukwu gọziri ụmụ Igbo nke ọma, anyị nwere tatuu (tattoo) nke anyị tupu ndị ọcha e wetara anyị adigboroja nke ha!
← APC crisis: Atiku speaks on Okorocha ‘dumping’ ruling party
Facebook sues South Korean firm for unlawfully using its data →